▄ လူငယ်တစ်ယောက်၏ အလုပ် – Min Thayt
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးရေးရလောက်အောင် အရေးကြီးတဲ့အလုပ် ရှိလို့လား။ ဒါမှ မဟုတ် ဒီအလုပ်ဟာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်။ တနည်းအားဖြင့် လူငယ်တစ်ယောက် မဖြစ် မနေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ပြောဖို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို ဘာလဲ။ လူငယ်တစ်ယောက်မှာ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုတာ ဘဝနဲ့ ချီပြီး အရေးကြီးတာ ရှိလို့လား။ အရေးကြီးတာတွေက အများကြီး မဟုတ်ဘူးလား။ အဲသည့်အရေးကြီးတာတွေထဲကမှ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာကို တကူးတပြောရလောက်အောင်၊ အရေးကြီးတာတွေထဲက မဖြစ်မနေ အရေးပါနေတာ ရှိလို့လား…..။
ရှိတာပေါ့။ ရှိနိုင်တာပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ။ အဲဒါဟာ ဘာလဲ။
လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ စာဖတ်တဲ့အလုပ်ကို မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာလား။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ငွေရဖို့၊ ငွေရှာဖို့ အလုပ်ကို လုပ်ရမှာလား။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ပညာရှာတဲ့အလုပ်၊ အသိပညာရှာတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရမှာလား။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ။ ငွေကြေးလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ပညာဗဟုသုတရှာတဲ့အလုပ်လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာလဲ။ လူငယ်တစ်ယောက်မှာ ပညာဟာ အရေးမကြီးဘူးလား။ ဒါဆိုရင် အာဏာရနိုင်တဲ့အလုပ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဖို့လား။ မဟုတ်ဘူး။ အာဏာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ရာထူးလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဩဇာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာလဲ။ ဒါဆိုရင်ဘာလဲ။
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်တွေ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည့်အလုပ်တွေထဲမှာ အရေးအကြီး ဆုံးအလုပ်ကတော့၊ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ကို တကူးတက လုပ်ကို လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်။ မဖြစ်မနေ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်မနေ လုပ်ကို လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကတော့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်တာဟာ အလုပ်လား။ ဟုတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပါ။ အလုပ်လို သဘောထားပြီးကို လေးလေးနက်နက် ထားပြီး လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ။
စိတ်ကူးယဉ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ကျနော် အထင်မှားခဲ့ဖူးတာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ် တယ်ဆိုတာ စိတ်ကို ပေါ့လျော့စေတာ၊ စိတ်ကို လွင့်ပါးစေတာလို့ ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပျင်းတဲ့သူတွေသာ စိတ်ကူး ယဉ်ပြီး လေတဲတိုက်အိမ်ဆောက်နေကြတာလို့ တွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ဟာ ယောက်ျား တစ် ယောက်အဖို့ ပိုလို့တောင် မသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကြီးပွားတက်မြင့်ချင်တဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေဖို့ အချိန်မရှိဘူးလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် မှားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် လွဲခဲ့ပါ တယ်။
ကျနော့် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုဟာ ဘယ်အချိန်မှာ သတိချပ်ဖြစ်စေခဲ့သလဲ။ ကျနော် စာတွေ လျှောက်ဖတ်ရင်း ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ စာအုပ်တွေ တော်တော်များများဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည့်မှာ ကိုယ်က လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတော့၊ လူငယ် တွေအကြောင်း သတင်းမက်ဆေ့ပေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ တွေ့ရင် သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ။ သိပ်ပျော်တာပဲ။ အဲဒါ တွေကို တွေ့ရင် မလွတ်တမ်း ဖတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ လူငယ်ဆောင်းပါးတွေကို အဖတ်များခဲ့ ပါလေရော….။
အဲသည့်မှာ ကျနော့် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကို ကျနော် သတိရစေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်တာနဲ့ပတ် သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းဟာ လူငယ်တွေကို စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ လူငယ်တွေကို စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ အားပေးပါတယ်။ လူငယ်တွေ စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ လိုတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်။ လူကြီးဖြစ်သွားရင် စိတ်ကူး မယဉ်ရဲတော့ဘူး။ စိတ်ကူးမယဉ်တတ်တော့ဘူး။ လူငယ်ဘဝမှာပဲ စိတ်ကူးယဉ်ရဲတာ။ စိတ်ကူးယဉ်ပါလို့ အမြဲ တမ်း တိုက်တွန်းရေးသားတာတွေ့ရတယ်။
ဒီလို တိုက်တွန်းမှုမျိုးကို တစ်ပုဒ်ကနေ နှစ်ပုဒ်။ နှစ်ပုဒ်ကနေ လေးငါး ဆယ်ပုဒ်…. စသဖြင့် ခပ်များများတွေ့လာ ဖတ်လာရတဲ့အခါမှာ၊ ကျနော် ကိုင်စွဲထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအယူအဆကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် သံသယ,စ ဖြစ်လာတယ်။ ငါထင်နေတာများမှားနေပြီလား။ အဲသည့်တော့ ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းက ဘာလို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ကို ဒီလောက် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ရေးနေတာလဲ။ ဒါဟာ အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းရှိရမယ်။ အဲဒီ့ အကြောင်းက ဘာလဲဆိုတာကို ရှာချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။ အဲသည့်တော့ ကျနော် စာအုပ်တွေထဲမှာ ခေါင်းတိုး ရှာမိတယ်။
သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ တစ်လျှောက်လုံးမှာ၊ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ လူတွေကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာကြီးက တိုးတက်ပြောင်းလဲမြင့်မားလာခဲ့တာဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သွားတွေ့တယ်။ နောက်…..၊ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ မိန့်မှာချက် တစ်ခု။ “အသိဗဟုသုတထက် စိတ်ကူးက ပိုအရေးကြီးတယ်” တဲ့။ အဲဒီ့ မိန့်မှာချက် ကို ဖတ်မိတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နည်းနည်း မေးခွန်းပြန်ထုတ်မိတယ်။ ငါ အရေးကြီးပါတယ်လို့ စွဲမှတ်ယူဆ ထားတဲ့ အသိပညာကိုတောင် အိုင်းစတိုင်းက သူ့ထက်အရေးကြီးတာက “စိတ်ကူးဖြစ်တယ်” လို့ ပြောတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ အဲသည့်မှာလည်း အကြောင်းရှိရမယ်လို့ တွေးပြီး ထပ်ရှာဖွေမိပြန်ရော။ ရှာတော့ တွေ့တယ်။ တွေ့တော့…..ဟုတ်လိုက်တာ၊ မှန်လိုက်တာလို့ ယူဆပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ့လား… လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ့လားလို့ နားလည်လာမိပြန်တယ်။
နောက် …. ထပ်တွေ့ရသေးတယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ထဲမှာ။ ကျနော် ဖတ်နေကျဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်သောစိတ် စာအုပ် (၂၀၀၆)။ အဲသည့်ထဲမှာ ဘယ်လို နားလည်လိုက်ရသလဲဆိုတော့၊ လူငယ်တွေ စိတ်ကူးယဉ်ရမယ်။ ရူးရင်ရူး ၊ မရူးရင် ထူး။ စွန့်စားတဲ့လူတွေကြောင့်သာ ကမ္ဘာကြီးဟာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာဆိုတဲ့ အမြင်ကို ကျနော် ထပ်ရတယ်။ ဒီမှာလည်း စိတ်ကူးယဉ်တာနဲ့အတူ၊ ရူးတာ၊ စွန့်စားတာ…. ဒါတွေကိုပါ နားလည်လိုက်ရပြန်တယ်။
စိတ်ကူး ၊ ရူး ၊ ထူး
စိတ်ကူးယဉ်တာ ဘယ်လောက်တောင် ယဉ်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့၊ ရူးတဲ့အထိ တောင် စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လိုတယ်။ ရူး တယ်ဆိုတာ ရူးနှမ်းတာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ရူးသွပ်တာ ကို ပြောတာ။ crazy ကို ပြောတာ။ ခရေဇီဖြစ်တာကို ပြောတာ။ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုခု၊ အနုပညာတစ်ခုခု၊ စာပေ တစ်ခုခု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုအပေါ်မှာ ရူးသွပ်တာကို ပြောတာ။
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူသာ ရူးသွပ်တဲ့အဆင့်ကိုရမယ်။ ရူးသွပ်တဲ့သူမှသာ အန္တရာယ်တွေကို မမှုဘဲ စွန့်စားနိုင်တယ်။ စွန့်စားတဲ့လူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သာ ကမ္ဘာကြီး တိုးတက်လာတာ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို လေ့လာကြည့် ပါ။ အခု ကမ္ဘာကြီးဟာ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့သူတွေ စီရင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီးဟာ အရူးတွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကြောင့် တိုးတက်မြင့်မားလာပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီးဟာ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ခဲ့သူတွေကြောင့် လူ့အဆင့်အတန်းဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ။
• နယ်သစ်ပယ်သစ်တွေကို စွန့်စွန့်စားစား ရှာဖွေခဲ့သူတွေ ရှိလို့သာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။
• လေပေါ်မှာ ငှက်တွေပျံသလို ပျံနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ လူတွေကြောင့်သာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရေကြောမြေကြောတွေကို ချုံ့နိုင်ခဲ့တာ။
• သိပ္ပံနည်းပညာရပ်တွေအပေါ်မှာ ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်သာ စကြာဝဠာကို လူတွေ ခြေဆန့်နိုင်ခဲ့ တာပါ။
• ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ဘဝမေ့ ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်သာ ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုလက်ရာတွေ၊ လူသား ဖန်တီးမှုအံ့ဖွယ်တွေ ဖြစ်တည်လာခဲ့တာပါ။
တခြားတခြားသော ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ မြောက်မြားစွာ ရှိနေသေးပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ်တဲ့လူတွေ၊ ရူးတဲ့လူတွေ၊ စွန့်စားတဲ့လူတွေသာ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိနားလည်စေချင်ပါတယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းအစောင်စောင်ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရင် အထင်းသားတွေ့နေရပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ငွေကြေး၊ အာဏာ၊ အသိပညာ…. စတာတွေထက် ဘာလို့ စိတ်ကူးက အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောတာ လဲ။ အကြောင်းရှိပါတယ်။ တကယ်စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူဟာ သူ့စိတ်ကူးတွေအတိုင်း တကယ်အကောင်အထည် ဖော်ချင်လာတယ်။ စိတ်ကူးတွေအတိုင်း တကယ်ဖြစ်ချင်လာတယ်။ တကယ်ဖြစ်ချင်လာတဲ့စိတ်က သူ့ကို တစ်ချိန်လုံးတွန်းနေတယ်။ တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ သူ့ကို တိုက်တွန်းနေတယ်။ စိတ်ကူးတွေယဉ်လိုက်၊ ဒီလို ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးပြီး ကြည်နူးနေလိုက်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့စိတ်ဇောထဲမှာ စိတ် အင်အားတွေက စုစုလာတယ်။ များများလာတယ်။ စိတ်ဇောတွေက သန်သန်လာတယ်။ ဖြစ်ချင်ဇော၊ လုပ်ချင် ဇော၊ ဆန္ဒတွေက ပြင်းထန်လာတယ်။ ဒါဟာ ဆန္ဒာဓိပတိပဲ။ ဒါဟာ ဆန္ဒာဓိပတိပါပဲ။
စိတ်ကူးကြောင့် စိတ်ဆန္ဒတွေ အားကြီးလာရင်၊ စိတ်က ဆောင်တော့တာပဲ။ ဖြစ်ချင်တယ်။ လုပ်ချင်တယ်။ ရှိ ချင်တယ်။ လေ့လာချင်တယ်။ သင်ယူချင်တယ်။ ဆည်းပူးချင်တယ်။ အတွေ့အကြုံလိုချင်တယ်။ စွန့်စားချင် တယ်။ လုပ်ပြ ကိုင်ပြချင်လာတယ်။ ကိုယ့်အစွမ်း၊ ကိုယ့်လက်စ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိချင်လာတယ်။ အောင် မြင်လာချင်တယ်။ ဒီလိုတွေကို လက်တွေ့လုပ်လိုက်ရမှ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူရဲ့စိတ်က အာသာပြေတယ်။ နေလို့ ထိုင်လို့ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ သူ့စိတ်ကူးတွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တွန်းတွန်းတိုက် တိုက်ကြိုးစားနေတော့တာပါပဲ။
အဲသည်လိုစိတ်နဲ့ ကြိုးစားနေမှတော့၊ နောက်ကနေ ဝီရိယကလည်း လိုက်လာတယ်။ ပညာကလည်း လိုက်လာ တာပါပဲ။ သိချင်စိတ်၊ တတ်ချင်စိတ်နဲ့ လေ့လာတော့၊ ဖတ်တော့၊ မှတ်တော့ သိလာတယ်။ နားလည်လာတယ်။ တတ်မြောက်လာတယ်။ တတ်ကျွမ်းလာတယ်။ အသိပညာဆိုတာ သိချင်စိတ်၊ တတ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူဆီ အလိုလို ရောက်လာတာပဲ။ ရလာတာပဲ။ ငွေကြေးဆိုတာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ မပျင်းမရိ လုံ့လစိုက်ပြီး ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်၊ စိတ်ဆန္ဒဇောပြင်းပြင်းနဲ့ လုပ်နေတဲ့သူဆီကို ငွေကြေးဥစ္စာဓနဆိုတာလည်း အလိုလိုရောက်လာတာပဲ။ ရလာတာပါပဲ။ အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလည်း ဒီလိုမျိုးပါပဲ။ လူအများကို အကျိုးပြုချင်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်၊ လူသားဖန်တီးမှုတွေထဲမှာ အပြောင်မြောက်ဆုံး အနုလက်ရာ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေကို ဖန်တီး၊ ရေးဆွဲ၊ သီဆို၊ ရေးစပ်၊ ဖော်ကြူး၊ ထုဆစ်၊ ရှာဖွေ…. စတဲ့ အလုပ်တွေကလည်း စိတ်ကူး စိတ်ဇောတွေ ထက်ထက်သန် သန်နဲ့ လုံ့လစိုက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေက အလိုလို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာတာချည်းပါပဲ။ စိတ်ကူးဟာ အရေးကြီး ပါတယ်။ စိတ်ကူးဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကန့်အသတ်တွေ အဟန့်အတား အတားအဆီးတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းနေသေးတဲ့ လူငယ်အရွယ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ကို တကယ်လုပ်ကြ ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ စိတ်ကူးယဉ်ကြပါ……
လူတွေက သာမန်အားဖြင့် ပြောကြတယ်။ စိတ်ကူးက အလကားရတာပဲ။ စိတ်ကူးက လူတိုင်းယဉ်နေကြတာပဲ။ အခု ခင်ဗျားပြောသလို ဖြစ်လို့လားလို့ ခွန်းတုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ လူတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်နေတယ် လို့ ထင်နေကြတာပါ။ တကယ် စိတ်ကူးမယဉ်ကြပါဘူး။ တကယ် စိတ်ကူးမယဉ်ရဲကြပါဘူး။ စိတ်ပျံ့လွင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လွင့်ပါးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ….. အကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ ဥဒ္ဒိစ္စ ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်တွေ လွင့်ပါး၊ စိတ်တွေ ဝေဝါး၊ စိတ်တွေ ထွေပြား၊ စိတ်တွေ လွင့်မျောနေတဲ့လူတွေသာ များပါတယ်။ လူတွေဟာ ဒါတွေဖြစ်နေတာကို စိတ်ကူးယဉ်နေတာလို့ အမှတ်မှားနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
• တကယ်စိတ်ကူးယဉ်ရဲတဲ့သူ ရှားပါတယ်…..
• တကယ်စိတ်ကူးယဉ်တဲ့လူဟာ ပျင်းနေတဲ့ ငပျင်းတကောင် မဟုတ်ဘူး။
• အမြဲ ခွေအိပ်နေတဲ့ ငပျင်းတစ်ကောင် မဟုတ်ပါဘူး။
• တကယ်စိတ်ကူးယဉ်ရဲသူ ရှားပါတယ်။
• လူငယ်တွေ စိတ်ကူးယဉ်ကြပါ…..
၁၀ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၂၀။
Tagged Life Style, Philosophy, Work, Youth
Previous post ယုံကြည်မှုလိုအပ်ချက်
Next post ▄ ဗမာ့အာဏာဓလေ့
One thought on “▄ လူငယ်တစ်ယောက်၏ အလုပ်”
Zin Ye says:
အရမ်းသဘောကျပါတယ် ဆရာ။ စိတ်ကူးယဉ်သူဟာ သူ့စိတ်ကူးပေါ်မှာလည်းတာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိရမယ် လို့မြင်မိပါတယ်။